Ciidamo ka tirsan Xoogga Dalka oo tababar loosoo xirey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ciidamo ka tirsan Xoogga Dalka oo tababar loosoo xirey
Ciidamo ka tirsan Xoogga Dalka oo tababar loosoo xirey
(Baydhabo) 23 Agoosto 2018 – Qaar kamid kamid ah ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qeybta 60-aad ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Saraakiil ka socotay dalka Ingiriiska oo tababrkan fulineeysay ayaa dufacadii tababarkan qaadatay oo aheyd dufcadii shanaad,ayaa ka koobbnaa boqol askari.
Ugu dambeyntiina sarkaal tababarayaasha Ingiriiska ka mid ah ayaa sheegay in ujeedka tabaradan ay tahay waxa uu ku sheegay “tayeeynta” ciidamada qalabka sida kuwaas oo lugu rajo weeyn yahay ineey la wareegaan ammaanka deegaanadaas.
Previous articleDAAWO: Gobolka Soomaali Galbeed oo gaarey go’aan geesinnimo leh! (Maxaa dhacay?)
Next articleWuxuu ahaa faqiir si fudud ku helay hamigiisii + Sawirro